အကောင်းဆုံး SPD နင်းကဘာလဲ? - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > Wellgo pedals review - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Wellgo pedals review - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
အကောင်းဆုံး SPD နင်းကဘာလဲ?
Shimano 105 R7000SPDSL ။ Theအကောင်းဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်နင်းရာသီဥတုအခြေအနေမိုင်အကွာအဝေးရှိလူများအတွက်၊ စျေးနှုန်းကိုစဉ်းစား။ ၎င်း၏အလေးချိန်ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
Shimano Ultegra R8000SPDSL ။
Shimano Dura-Ace ကိုSPDSL ။
Keo Blade Carbon ကိုကြည့်ပါ။
Keo2Max ကြည့်ပါ။
Clipless pedals များကိုအကြမ်းအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်နင်းများနှင့်တောင်တက်စက်ဘီးနင်းခြင်း။ လူတွေဟာ clipless pedals ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကမကြာခဏမေးလေ့ရှိပါတယ်။ - ဤဆောင်းပါးတွင်ခြားနားချက်များကိုရှင်းပြပြီးသင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုပြသပါမည်။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (ရယ်သံများ) - Olly လာပါ။ အိုး (Beep) ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှက်မကွဲခင် ဦး ဆုံးခြေနင်းနှစ်မျိုးကိုအရင်သွားကြည့်ရအောင်။ ဒီဆောင်းပါးကိုလုပ်ဖို့ Look နဲ့သူတို့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်၊ clipless နင်း၏ဒီဇိုင်း။
ငါဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးခြေနင်းကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာပြန်ခေါ်လာတယ်။ အဲဒါရဲ့မူလဇစ်မြစ်ကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပဲ၊ တကယ်တော့နှင်းလျှောစီးနည်းပညာမှာပါ။ တကယ်တော့သူတို့ပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ Look နှင့်ပူးပေါင်းစဉ်သင်ပေးမည့်သတင်းအချက်အလက်သည်ခြေနင်း၏အမှတ်တံဆိပ်အများစုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါက Look Keo2Max လမ်းနင်းပါ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှိဆုံးခြေနင်းများ n တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတော့တစ်စုံက ၂၅၂ ဂရမ်ပဲလေးတယ်။ ပြီးတော့ဝက်အူတွေအပါအ ၀ င် ၆၅ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိတယ်။ ဤခလုတ်များကိုဖိနပ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးဖိနပ်၏အောက်ခြေတွင်ထားရှိသောသုံးဘီးဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုတာရှည်ခံပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
သူတို့ကသင်တန်းအဖြစ်မကြာမီသူတို့ဟောင်းနွမ်းနေအဖြစ်အစားထိုးခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သို့သော်သင်သူတို့လမ်းလျှောက်ခြင်းမရှိပါက၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောသက်တမ်းရှိသည်။ အမှု၌၎င်းသည်သက်တမ်းအတော်အတန်လျော့ကျသွားသည် - ဤသည်မှာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Look X-Track Race တောင်ပေါ်ဆိုင်ကယ်နင်းဖြစ်သည်။ အမြင်အာရုံအားဖြင့်, နင်းခန္ဓာကိုယ်၏အပြင်ဘက်လမ်းနင်းထက်အများကြီးသေးငယ်သည်။
ဒီတစ်စုံက ၃၆၃ ဂရမ်ရှိတယ်။ ၎င်းတို့သည်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပိုသေးငယ်သည်။ ထို့အပြင်ဝက်အူအပါအ ၀ င်တစ် ဦး လျှင် ၅၅ ဂရမ်ခန့်အလေးချိန်ရှိသည်။ အလေးချိန် မှလွဲ၍ လမ်းဘေးစက်ဘီးနင်းနှင့်တောင်ပေါ်စက်ဘီးနင်းအကြားအဓိကခြားနားချက်မှာဤကဲ့သို့သောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရတာသူတို့ကနှစ်ဖက်ရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့အခွင့်အရေးနှစ်ဆနီးပါးရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက enduro စီးနင်းမှုကိုပိုမိုရှည်ကြာတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မောင်းနှင်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့တောင်ကြီးတောင်ငယ်ဆိုင်ကယ်နင်းအမျိုးအစားလည်းရှိတယ်။
ဒါက X-Track En-Rage လို့ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ X-Track Race ကိုကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့တောင်ကြီးစက်ဘီးနင်းလို cleatas အတိအကျကိုပဲသုံးပေမယ့်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ခြေနင်းကိုယ်ထည်ရှိတယ်။ - ထို့ကြောင့်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်andရိယာနှင့်ခြေထောက်ပေါ်တွင်အနားယူရန်အတွက်ပိုကြီးမားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုရှည်လျားသောခရီးကိုသွားစဉ် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ဆိုးကျိုးမှာ၎င်းတို့သည်ပိုကြီးသည်၊ သူတို့သည်အလွန်ကြီးမားပြီးထို့ကြောင့်ပိုမိုလေးလံသည်။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်စုံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Look Keo2Max လမ်းနင်းထက်ဂရမ် ၂၀၀ ဂရမ်ပိုပါတယ်။ အိုကေ၊ အခုတော့ငါတို့ဟာကြီးမားတဲ့အလေးချိန်ကွာခြားမှုတွေနဲ့အမြင်အာရုံကွဲပြားမှုတွေကိုလမ်းထဲကနေရရှိပြီလို့ထင်တယ်၊ စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်လုပ်ဖို့လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ။ ။ - ပြိုင်ပွဲအနည်းငယ်လုပ်ပါ။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) - တစ်ခုစမ်းသပ်ပါ။
ဒါဟာစမ်းသပ်အတွက်စံ clipping ဖြစ်ပါတယ်။ - ၎င်းသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်များစွာသော GCM မော်ဒရေးသမားများ၏ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ - ဟုတ်တယ်၊ Matt Stevens (အသံမြည်) - ငါတကယ်ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်၊ မင်းကိုမုန်းတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆိုလိုတာ .. (Beep) - ဒီရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အပြည့်အဝညှပ်နိုင်ဖို့အချိန်ယူရမယ်။
Danny ကလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တွေ၊ ခြေနင်းတွေကိုသုံးပြီးငါတောင်တက်စက်တွေကိုသုံးတယ်။ သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ သွား - ဟုတ်ကဲ့၊ - Wow, ကောင်းလှ၏။ တစ်။
Olly ထံမှနံပါတ်သုံးကြိုးစားကြည့်ပါ။ သုံးယောက်တွင်နှစ်ခု၊ တစ်ခုစီတွင်သွားပါ။ ၇.၃၈ စက္ကန့်။ (ရယ်သံများ) ဒါကသူ့ပျှမ်းမျှကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မယ်မဟုတ်လား။ ဒီတစ်ခါလည်းသူလွှတ်လိုက်မယ်
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြိုးစားပါ့မယ် မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုသုံးခုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံကြိုးစားပါ။ ဒီတော့သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊
မင်းတကယ်ရှိလား - အင်း။ - အိုကေ၊ အဲဒီ ၂.၉၂ ပါ။
ဒါဟာဒုတိယနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ - စိတ်မကောင်းပါဘူးလား - အတူတူပင်မဟုတ်လား။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်သုံးစက္ကန့်ထက်မကပါ။ ငါမသိဘူးမင်းမင်းရဲ့ခြေနင်းကိုနင်းခဲ့ရတာလား - ကောင်းပြီ၊ မင်းသိတာပေါ့ (ညည်းညူ) --- (ရယ်သံများ) ကြည့်သင့်သည် ။- သုံး။
နှစ်။ တစ်ခု Go.4.30 ။ - လေး? - သုံး, နှစ်, တ, go.5.5 ။ - အိုး၊
မင်းအခုငါ့ကိုပြောနိုင်ပြီနင်မင်းနင့်ခြေကိုဖိခဲ့တာလား။ - အင်းငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ - အိုကေငါရတယ် ငါမှားယွင်းတဲ့နည်းစနစ်ရှိတယ်။ - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ သွား - မဟုတ်၊ သွားကြစို့
ကောင်းပြီ။ အောင်ပွဲကငါ့အတွက်ပါ။ တောင်ကြီးတောင်ငယ်၏ခြေနင်းကိုဝယ်ခြင်းကသင့်အားအရေးကြီးသောစက္ကန့်များကိုနေ့တိုင်းကယ်တင်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ရလဒ်များကလမ်းဘေးနင်းကောင်များနှင့်တစ်စက္ကန့်ခန့်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှပိုဝေးသောတောင်ပေါ်စက်ဘီးနင်းများတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းထင်ရှားစေသည်။ ဤရလဒ်များက အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နင်းစနစ်တစ်ခုတည်းရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုလီ - အိုကေကိုကျိန်းသေရိုက်နှက်လိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုအမှန်တကယ်အားဖြည့်ပေးသည်။ ကောင်းပါပြီ၊ တောင်တက်စက်ဘီးနင်းခြင်းဟာနှစ်ဆဖြစ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်ကသူတို့ကိုကလစ်လိုက်တဲ့အခါလမ်းနင်းလမ်းတွေဟာပိုကြီးတဲ့ခလုတ်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်ဤစမ်းသပ်မှုအပြီးသတ်သောဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလိုအပ်တယ်။ သူ့ကိုအဆင့်မြင့်သောလုပ်ရပ်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်တစ်ခုကိုငါအနိုင်ရလိမ့်မည် - ထိုအရာကားအဘယ်နည်း။ - ဒါကရွှံ့စမ်းသပ်မှုပဲ။ ဟုတ်တယ်၊ ငါ့ကို ASO သင်တန်း၊ Olly ကိုခေါ်သွားပါ။ အိုကေ၊ စမ်းသပ်မှု ၂ ။
သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုစတင်ရန်၊ ရွှံ့ရွှံ့ထဲကို ဖြတ်၍ လျှောလျှောဖြတ်ကျော်စီးဆင်းရာမှအထက်သို့တက်ရမည်။ ထိပ်ကလစ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးသင်နှစ် ဦး စလုံးခြေထောက်နှစ်ချောင်းချောင်းနေချိန်တွင်အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသောချစ်စရာကောင်းသောဖိနပ်အသစ်အဖြူရောင်ဖိနပ်စီးထားသည့်ဖိနပ်အသစ် - ဒန် - ထိုအရာများ၊ ဟုတ်ပါသည်။ သူတို့ညစ်ပတ်ပေလိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ် Markers ကိုသွားသည်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ဂရိတ်နည်းပညာ။ အိုလီလာပါ။ - အိုး (bep) .- ၁၅.၃၃ စက္ကန့်။
ပြေးလိုက်တာကိုမြင်လား - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ သူထွက်သွားပြီ - အိုး! (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ကျွန်ုပ် ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။ - 15:33 - 15 မေ - အိုး။
ဒါကအပြီးအပြတ်မဟုတ်ပါဘူး အပြီးသတ်။ နှစ် ဦး ထက်ပို run.- နှစ် ဦး ထက်ပို? (mumbles) - အိုကေ၊ မင်းသွား၊ သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ သွား - shit ။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) (မြည်သံ) - အိုးသွားကြကုန်အံ့။
စက္ကန့် ၂၀ နီးပါး။ စက္ကန့် ၂၀ ကျော်၊ ဇွန် ၂၀ ရက် - အိုး…ဆိုလိုတာကငါတို့ကဒီခြေနင်းကိုအလေးအနက်မထားသင့်ဘူး။ ဒါကယာဉ်မောင်းရဲ့အမှားပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနင့်ကိုအကောင်းဆုံးအနေအထားပဲထားမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါနားလည်တယ်။ - ဒါပဲ။
သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ go.- ငါရှိမယ်။ ဒါကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကထက်တောင်ပိုမြန်တယ်။ ၁၄ စက္ကန့်။ သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ (ပျော်ရွှင်သောဂီတသံ) Olly.- တွင် ၀ င်ပါ။ - ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးကားအဘယ်သို့နည်း - 14.- တကယ်ပဲလား - ဟုတ်တယ်၊ ၁၂.၃ အချိန်၊
သုံး, နှစ်, တ, သွားပါ။ ငါတံခါးကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်နေသည်။ - ၂၄ ။ - နံပါတ်နှစ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ကောင်းတာပေါ့၊ ငါ့ရွှံ့ပေါ်မှာစက်ဘီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးမြန်မြန်ပြန်လာဖို့ကျွန်မမှာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူး။ (Beep) - ကောင်းမွန်သောနည်းပညာ။
အိုလီလာပါ။ - ငါအမြန်ဆုံးအချိန်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်တက်စက်ဘီးနင်းတွေဟာရွှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှသင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ထည့်သွင်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာပါ။
သို့သော်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုလည်းလမ်းလျှောက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီတော့မင်းကပိုပြီးထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ငါဒုတိယအကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အကြောင်းပြချက်ကဲ့သို့အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်မှာ၊ ဤသည်မှာလမ်းဘေးစင်္ကြံသွားခြင်းထက်လမ်းဘေးဖိနပ်နှင့်ပြိုင်ကားစက်ဘီးနင်းခြင်းများဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်လုပ်မယ့်အရာအားလုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အထပ်ထပ်နေပါ။ သို့သော်စက်ဘီးစီးခြင်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူအများကမြေပြင်အနေအထားသို့ဝင်ရောက်ချင်ကြသည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်အဲဒီလိုဆိုရင်ဒါကသေချာပေါက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတစ်ခုပါ၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒီဟာကအပန်းဖြေစီးနင်းတာနဲ့ခရီးဝေးသွားတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရုံတင်မကဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ။ သို့သော်၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ခြားနားချက်။ ကောင်းပြီ၊ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ဖိနပ်ကအနက်ရောင်နဲ့လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဖြူရောင်တွေကလူကြိုက်များတယ်၊ ရွှံ့တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသိပ်မကြည့်နဲ့။ အိုး၊
ငါ၏အသုတ်များထုတ်, သူတို့အသစ်ကကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည် (slo w jazz music) ဒါကစမ်းသပ်မှုသုံးခုပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲ။ အဲဒါကလမ်းဘေးဖိနပ်စီးတာထက်တောင်စက်ဘီးစီးတာထက်ပြေးရတာပိုလွယ်တယ်ဆိုတာပြဖို့ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုပဲ။ - ငါတို့သိတယ်။
ဘာကြောင့်လိုတာလဲ ဤမျှလောက်များစွာသောလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ပါသလား - အင်း၊ ခင်ဗျားကမင်းရဲ့ပြိုင်ဆိုင်ကယ်စက်ဘီးကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကထူးဆန်းနေတာပဲ။ Bambi သည်ရေခဲပေါ်ကလိုပဲ။ တောင်ကစက်ဘီးဖိနပ်စီးရတာပိုလွယ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတုန်းကအရိုးတွေရပ်နေလို့ပဲ။ ငါကြီးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဆူညံသံ
ပုံမှန်ဖိနပ်လိုပဲ ယခုဤအချက်၌သင်စက်ဘီးစီးခြင်းခြေနင်းကိုဝင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည့်အခါတစ်စုံတစ် ဦး ကလမ်းပေါ်ရှိတိကျသောခြေနင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ရမည်ကိုသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ရွှံ့များကိုဖယ်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးအလွယ်တကူပိတ်နိုင်ခြင်း - တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သင်စမ်းသပ်ချက်သုံးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည် ငါဟာရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မင်းအနိုင်ရအောင်လုပ်မှာသေချာတယ်။ မမှန်ပါဘူး? ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားရမယ်ဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတဲ့ Pe dal ကိုသွားဖို့အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့၊ မဟုတ်ရင်သူတို့မထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး။ ပထမ ဦး စွာ aerodynamics ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖိနပ် - ခြေနင်း interface ကိုကနေလုပ်မယ့်မဖြစ်စလောက်အမြတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျတစ်ခုခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မျက်နှာပြင်biggerရိယာသည်ပိုမိုကြီးမားပြီး၊ ဒါကခရီးရှည်ကြီးတွေအပေါ်သင်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တတိယအချက်မှာ၎င်းသည်ကြီးမားသောစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ပိုပြီးထိရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကခြေနင်းစီးခြင်းနှင့်အပြေးဖိနပ်များဖြင့်လမ်းပေါ်မှာအများကြီးစီးနင်းခဲ့ရသည်။ ငါတောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်တောင်ကြီးစက်ဘီးဖိနပ်များနှင့်အတူအများကြီးစီးနင်း။
ငါခြားနားချက်ကိုပြောပြနိုင်မလား? ကျွန်ုပ်သည်မျက်မမြင်ဖြစ်သွားနိုင်သော်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ - အင်း၊ ငါနှစ်ခုလုံးရဲ့ခြားနားချက်ကိုသေချာပြောနိုင်တယ်ထင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အနည်းငယ်မျှသဘောတူသည်။
ငါတို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပိုမိုကြီးမားသောအဆက်အသွယ်areaရိယာအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်endရိယာရှိသည့် enduro တောင်တက်စက်ဘီးနင်းများရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အပေါ့ပါးဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်နင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလေးချိန်အားနည်းချက်ရှိသည်။ တဖန်သင်တို့ KeoBlade, မယုံနိုင်လောက်အောင်အလင်းနင်း။ ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ငါဟာအများအားဖြင့်လမ်းပေါ်မှာစီးနင်းပြီးကတည်းကပိုပြီးပေါ့ပါးတဲ့ခြေနင်းကိုရိုးရိုးသားသားပြောပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသင်ဟာစက်ဘီးစီးတဲ့တောင်ပေါ်စက်ဘီးနင်းကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးနီးပါးအလုပ်ကိုလုပ်ကြတာပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ကလေးများကစားကွင်းသို့သွားပြီး၊ သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်အတူတောင်ကုန်းပေါ်ပြေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါကသင်အနိုင်ရလိမ့်မည် - ဟုတ်သည်၊ ကောင်းစွာ၊ ကောင်းသောအချက် - သင်အိမ်တွင်မည်သည့်ခြေနင်းကိုအသုံးပြုကြောင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ အကယ်၍ သင်တောင်ကြီးတောင်ငယ်၏ခြေနင်းကိုလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုအသုံးပြုပါကသင်ဘာကြောင့်လုပ်ရမည်နည်း။
အောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုချန်ထားပါ။ - ဟုတ်တယ်၊ ဒီဆောင်းပါးကိုအသုံးဝင်မယ်လို့သင်မျှော်လင့်ပါတယ် ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့အတူမင်းဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လက်မလျှော့လိုက်ပါ။
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးများအတွက် Subscribe ကိုနှိပ်ပါ။ အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကြည့်ပါ။ သင်အနိုင်ရခဲ့သောစမ်းသပ်မှုများမှဘားဘားများနှင့်ပြားဘားဆိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကော။ - ဟုတ်ကဲ့၊
စက်ဘီးစီးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောလိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ညှပ်ဖိနပ်မပိုဘူးအန္တရာယ်ရှိသောသင့်ရဲ့လေးနက်သောဒဏ်ရာသင့်ရဲ့အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြဘူးသောတိုက်ခန်းများထက်။ မြင်းစီးသူရဲအသစ်များသည်၎င်းတို့သည်တိုက်ခန်းများနှင့်မတူဘဲ ပို၍ လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းပြောကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်း၌အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီးကျွန်ုပ်သူတို့ကိုခေါ်သည့်အနေဖြင့်ကလစ်မရှိသောခြေနင်းများ၊ သင်လုပ်နိုင်သောရိုးရှင်းသောအမှားအနည်းငယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေက clipless pedals တွေကိုသုံးနေစဉ်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ထိပ်ဆုံးအမှားခြောက်ခုပါ။ (boom) ခြေနင်းပေါ်မှီဝဲခြင်းငါတို့ရှိသမျှသည်ပြုမိပါပြီ။ ဒါကြောင့်သင်မလိမ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ အနည်းငယ်သောအလေ့အကျင့်နှင့်နင်းကိုဘယ်လိုလွှတ်ရမလဲဆိုတာအနည်းငယ်စဉ်းစားမိတယ်။
သို့ဆိုလျှင်လှပပြီးခိုင်မာသောအရာတစ်ခုခုကိုမှီ။ နည်းနည်းလေ့ကျင့်ပါ။ သင်ခြေနင်းကိုလွှတ်ရန်သင်၏ခြေကျင်းကိုလိမ်ရန်အလေ့အကျင့်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ငါပြောခဲ့သလို, သင်စတင်ရန်သင်တစ်လျှောက်စီးနင်းလာပြီးသင်ရပ်တန့်တော့မည်ကိုသိသောအခါအနည်းငယ်စဉ်းစားရမည်။
လှည့်ကွက်ကိုစဉ်းစားပါ။ ခြေနင်းကိုဆွဲတင်ရန်ကြိုးစားနေသူများစွာသောသူများကဲ့သို့သင်အမှန်တကယ်ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ (edgy music) ဒီနေရာမှာသင့်ကိုကူညီနိုင်မယ့် setup tips နှစ်ခုရှိပါတယ်။ Shimano pedals ကိုသုံးပြီးတင်းတင်းမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် Voltage ကိုသင်အမှန်တကယ်ပိတ်နိုင်သည်။ ဒီနင်းမှထွက်ရန်လိုအပ်သောအားစိုက်ထုတ်မှုနည်းပါသည်။
ရှင်းလင်းမှုများစွာပါသောချပ်ပြားများကိုလည်းသင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစပြုသူများကိုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ထွက်ပေါက်မှထွက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ဤအထဲကရဖို့ပိုနှစ်သက်။ ငါ Crank Brothers ကိုသုံးသည်။ ထို့ကြောင့် 15 ဒီဂရီသို့မဟုတ် ၂၀ ဒီဂရီကြားတွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါအစောပိုင်းကထုတ်လွှတ်မှုကိုသွားပြီးခြေထောက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အစပြုသူတွေအတွက်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ဖိနပ်က crank နဲ့မနီးစပ်အောင်သေချာစေချင်တယ်။ ဒါနဲ့ဖိနပ်ရဲ့အစွန်းဆီကို ဦး တည်လိုက်တယ်။ ဤသည်ဖိနပ်ဝေး crank ကနေလှုံ့ဆော်ပေး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ကိုနေရာပေးခိုင်းတာကလည်ပတ်ကိုပိတ်ပြီးဖိနပ်နဲ့ထိဖို့ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအနည်းငယ်သောဖိအားပေးမှုနှင့်ခြေနင်းကိုချွတ်ရန်ခက်ခဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ပေါ့ပါးသောဂီတ) ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းနှင့် enduro စက်ဘီးများအတွက် Crank Brothers Mallet E LS ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
Enduro Clip Pedal LS သည်ရှည်လျားသောဗိုင်းလိပ်တံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ခြေနင်းများသည် cranks တွင်ကောင်းမွန်စွာဖြန့်ဝေထားသည်။ gi သင့်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် queuing factor ရှိသည်။ ဒါကကျွန်မကိုလုံးဝအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး
ငါနှစ်သက်တာကငါ့မှာဖိနပ်တွေအတွက်နေရာလွတ်ရှိတယ်။ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် gnarled ပစ္စည်းပစ္စယငါ့ခြေနင်းထဲကရလွယ်ကူစေသည်။ ငါ့ကိုဒီခြေနင်းကနေကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ဖိနပ်ရဲ့ဖိနပ်နဲ့ဒီနင်းအကြားပွတ်တိုက်မှုပဲ။
ဒီတော့ဒီနေ့ဒီတိုင်းမှာဒီတိုင်းပြည်ကောင်းတဲ့ဖိနပ်စီးရုံနဲ့ငါ့ခြေနင်းတိုင်းပြည်ခြေနင်းနင်းနေတယ်။ Down Hill သို့မဟုတ် Enduro နင်းကဲ့သို့သောပိုကြီးသည့်ခြေနင်းများပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အရာသည်ပိုကြီးသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်ဖိနပ်၏အောက်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်ချထားသောတံသင်အချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့မှသာသင်က၎င်းတို့ကိုအစဉ်အလိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီးချိန်ခွင်လျှာကိုရရှိနိုင်မည်၊ ခြေနင်းကိုသင်ခံစားရနိုင်သည်။ ပွတ်တိုက်ကိုသင်ခံစားရနိုင်သည်။ နင်းသွားပါ။ (တိတ်ဆိတ်သောဂီတ) တတိယအမှားမှာဖိနပ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။
ငါ့ခြေနင်းနှင့်ခြေနင်းကိုစနစ်တစ်ခုအနေနှင့်စဉ်းစားလိုသည်။ အချို့သောခိုင်မာသောဘဝါးများ၊ ပေါ့ပါးသည်။ Cro ss Country ဖိနပ်များသည်ခြေနင်းသေးငယ်မှုအတွက်တကယ်ကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာခိုင်မာသောဖိနပ်သည်ထိုအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ စက်ဘီးကိုအမြင့်ဆုံးစွမ်းအားပေးသည်။ ပိုမိုကြီးမားသော enduro ခြေနင်းများသည်ဖိနပ်များနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်သောအောက်ခြေဘက်တွင်ရာဘာများပြားသည်၊ အနည်းငယ်မြှောက်ပင့်ပြီးအနည်းငယ်သက်သာမှုပေးသည်။
ခြေထောက်ရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖြတ်ပြီးနင်းတာကိုခံစားရတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ခြေနင်းချောလိုခံစားရတယ်။ (Hissing) (ဖြေလျော့သောဂီတ) ဖိနပ်သေတ္တာ၏အောက်ခြေတွင်မှားယွင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည်နည်းစနစ်အားနည်းသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အတုံးရှည်လွန်းလျှင်၎င်းသည်သင်၏အပိုအလေးချိန်ကိုရှေ့သို့ဆွဲလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်နင်းအပေါ်အနည်းငယ်မတ်တပ်ရပ်။ ထို့အပြင်သင်၏နွားသငယ်ကြွက်သားများကိုလည်းဖိအားများစွာပေးသည်။ ဤသည်ကားကြွက်တက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်တစ်စုံတစ်ခုကိုကားမောင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်ကျောက်တုံးသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကဲ့သို့ပင်မောင်းနှင်သောအခါ။ စက်ဘီးကနှေးချင်တယ်၊ မင်းရဲ့အလေးချိန်ကနင်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာရှိတယ်။
ဤအလေးချိန်ကိုလက်ကိုင်ဘားများဆီသို့သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ခြေနင်းကိုဖိနပ်ထဲပြန်ထည့်ပြီးအဲဒီမှာသင့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါ။ အများကြီးမြှောက်သို့မဟုတ်ပင်ဖနောင့်။
ဒါဟာတကယ်တော့ငါ့နွားရုပ်အလေးချိန်ကိုကိုင်ထားလိမ့်မယ် ကျွန်တော့်ကိုပိုကောင်းတဲ့စီးနင်းအနေအထားနဲ့ပို့ပေးပါ နံပါတ် (၅) (ဖြေလျော့ထားသော techno ဂီတ) ကလစ်များဖြင့်ကားမောင်းခြင်းသည်သင့်အားမကောင်းသောနည်းစနစ်ကိုအားကိုးရန်လိုသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နည်းပြအချိန်၌တွေ့ရသောအမှားအယွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့နည်းတွေထဲကနေနည်းပြနည်းတွေသုံးပြီးသင်ရဲ့နောက်ဘီးမှာကောင်းတဲ့နည်းစနစ်တွေပြန်ထုတ်ဖို့အချိန်အများကြီးပေးခဲ့တယ်။ အခုတော့ကလစ်တွေနဲ့အလွယ်ကူဆုံး၊ မင်းခြေထောက်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ရုံနဲ့ခြေနင်းကလေထဲကိုတက်လာတယ်။
သငျသညျအခြို့သောအတားအဆီးတွေကျော်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်အလုပ်ညာဘက်ပြု? ဒါပေမဲ့၊ ငါဒီနည်းစနစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့စီးရီးစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါကြောက်တယ်။ ၎င်းသည်အမြစ်တွယ်လာပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောမြေအနေအထားကိုစီးနင်းလာသောအခါသင်၏နောက်ဘီးကိုအထူးသဖြင့်အမြဲတမ်းမနေသင့်ပါ။ တကယ်တော့သင့်အလေးချိန်ဟာမြေပြင်ပေါ်ကနေတက်ပြီးနောက်တာယာတွေပေါ်မှာရှိနေပေမယ့်အမြစ်အမြောက်အမြားကိုကျော်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်။
သင်အချိန်ကိုက်မှားယွင်းနေပြီးသင်၏အလေးချိန်သည်နောက်တာယာထက်ကျော်လွန်နေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကသင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါပြခဲ့တယ်။
စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်၏အလေးချိန်ကိုရွှေ့ဖို့ဘယ်လို။ တကယ်တော့သင့်တင်ပါးကိုသုံးပြီးဘီးကိုမြှင့်ပါ။ သင်၏တင်ပါးများကိုရှေ့သို့ချီ။ နောက်ဘက်တာယာကိုချီပါ။
အပြန်အလှန်ရှေ့တာယာအတွက်တော့သင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုထိုဘီးများကတားဆီးပေးသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမြေအနေအထားနှင့်ပတ်သက်လျှင် ပို၍ အသုံးဝင်သည်။ (soft techno music) ခုန်ချခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးမကောင်းသောနည်းလမ်း။
ငါတကယ်ပဲအတူတူပါပဲပြောနေတာနောက်ဘီးကိုငါ့ခြေထောက်နဲ့ကောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ကလစ်များနှင့်အတူစူပါလွယ်ကူသည်, သို့သော်ခုန်ရန်ကြွလာသောအခါသင်သည်သင်၏ခြေထောက်ကွေးနေသမျှကာလပတ်လုံးသာသင့်ရဲ့နောက်ဘက်ဘီးကိုတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကွေးမရှိရင်အဲဒါဘယ်လောက်မြင့်မားတယ်ဆိုတာကန့်သတ်ချက်ပါပဲ။
ထပ်တူပဲ၊ ထပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ဒါဟာသင်တိုက်ခန်းများမှတဆင့်အောင်သို့မဟုတ် clipsit လုပ်နေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ technique ကိုဖြစ်သင့်သည်။
ဒီတော့စက်ဘီးကိုဒီခုန်ပျံလာအောင်မြှောက်ဖို့စဉ်းစားပါ။ သင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုလေထဲရှိရှေ့ဘီးကိုပြန်မောင်းပါ။ ပဲ့တစ်စက္ကန့်ခေတ္တနားပါ။
ခုန်၏ထိပ်ကိုနှိပ်ပါထို့နောက်သင်၏တင်ပါးနှင့်အတူနောက်ဘီးမြှင့်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ အထက်နှင့်အထက်ကောင်းကင်သည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သင်ဤနည်းဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားစွာသွားနိုင်ပြီးသင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့တက်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်က clipless pedals တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတာနဲ့သင်စတင်ရန်နှင့်သင်၏စီးနင်းချိန်ကိုစဉ်းစားရန်အတွက် setup ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
နည်းပညာ။ ခဏအကြာမှာမင်းကသဘာဝရလာပြီးမင်းရဲ့ခြေနင်းကိုထုတ်ယူတော့မယ်။ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းပါတယ်
Plus အား, သင်အမှန်တကယ်ကြောင်းနင်းထိရောက်မှုမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ သင်တိုက်ခန်းများနှင့်ကလစ်များနှင့်ပတ်သက်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမြင်လိုလျှင်။ အဲဒီမှာနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Canyon Lux ကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုလိုပါကဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ချစ်စရာကောင်းသောစက်ဘီးကဲ့သို့။ အဲဒီမှာတစ်ခုယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မတက်ပေးပါနှင့် subscription ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Areပေါ့ပါးသောခြေနင်းတန်သည်? ကပိုမိုပေါ့ပါးသည်အစုံခြေနင်းနည်းပညာပိုင်းလိမ့်မည်လုပ်မင်းရဲ့စက်ဘီးကပိုမြန်တယ် ဒါဟာသင်စွမ်းအင်လျော့နည်းစေတဲ့အချက်ပါပဲပိုမိုပေါ့ပါးသည်ပိုလေးတဲ့တစ်ခုထက်ဆိုင်ကယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကြားအလေးချိန်အကွာအဝေးအဖြစ်သို့သော်ခြေနင်းအနည်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့်အလေးချိန်စုဆောင်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်လိမ့်မည်။06.03.2020
(metallic noise) (hypnotic EDM music) - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ အမြင့်၊ အမြင့်၊ အမြင့်၊ အမြင့်၊ အမြင့်၊ အမြင့် - ။ သင့်စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအဆင့်မြှင့်မှုကားအဘယ်နည်း။ ပြားချပ်ချပ်ခြေနင်းကနေကလစ်မဲ့ကူးပြောင်းခြင်းကိုလုပ်ခြင်းလို့ပြောလိမ့်မယ်။ - Clipless သည်ရှုပ်ထွေးသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အမှန်တကယ်စီးနင်းလိုက်ပါစီးနင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ခြေထောက်ပတ်လည်ရှိမြင်နိုင်သောလှောင်အိမ်ဖြစ်သည့်ခြေချောင်းများ၊ ထိုခြေနင်းအသစ်များတွင်မြင်နိုင်သောကလစ်မပါရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကလစ်မပါသောအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ - ဟုတ်တယ်၊ clipless pedals ကိုသုံးတဲ့သူတိုင်းကမင်းကိုပိုပြီးထိရောက်အောင်လုပ်မယ်၊ မင်းကိုမြန်မြန်လုပ်မယ်၊ မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီခြေနင်းတွေနဲ့နင့်ခြေနင်းကိုတကယ်ပဲထုတ်နိုင်မလား။ ? ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတစ်စုံတစ်ရာခြားနားအောင်လုပ်ပေးသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါတို့သိတာပေါ့။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာမယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးတောင်တက်နည်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ဖြေရှင်းမယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းမတပြင်လုံးကိုတောင်တက်။ တစ်ချိန်ကခြေနင်းချပ်ချပ်များနှင့်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် clipless နင်းကဲ့သို့၎င်းသည်အလွယ်တကူအသံထွက်နိုင်သည်။ တောင်တက်ခြင်းတစ်ခုလုံးသည် Mallorca ရှိ Sa Calobra ဖြစ်သည်။ ၉.၅ ကီလိုမီတာတွင်ပျမ်းမျှ gradient 7% ရှိသည်။
အဲဒီအစားကျနော်တို့ကထိပ်ကို ၃ ကီလိုမီတာအထိလျှော့ချလိုက်တယ်။ တနည်းကား, ပျမ်းမျှယို 7% ကျော်သည်။ သင်ကလစ်မပါသောခြေနင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေလိုပါကသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂူဂဲလ်ကိုလုပ်ပြီးစိတ်ကူးသည်ပါဝါလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ခြေနင်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိသဖြင့်သင်ပိုမိုထိရောက်သင့်သည်။ - ဟုတ်ကဲ့သင်နင်းကိုအောက်သို့ဆွဲချနိုင်သောကြောင့်သင်၏ခြေနင်းကိုပိုမိုထိရောက်စေသောကြောင့်စွမ်းအင်ပိုမိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Chris, ဒါကအဓိပ္ပါယ်မဲ့တာပဲ။ အသံကအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး၊ ဒုတိယကတော့ချေပတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်မှန်ပေမဲ့၊ ငါဟာငါ့ကိုခြေနင်းပြားတစ်ချောင်းနဲ့ပြိုင်ပြီးငါ့ကိုဘယ်တော့မှဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ - ဟုတ်တယ်၊ ငါနင့်ဆီကနေဖြုတ်ထုတ်ပစ်ရမလား။ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမချပါကကောင်းကျိုး၊ - ကျနော်တို့ပြေးနှစ်ခုလုပ်ဖို့သွားနေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးပြေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Fizik ကာဗွန်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်စီးဖိနပ်ဖြင့်ကလစ် နှိပ်၍ မရသောခြေနင်းများပေါ်တွင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းလုပ်သင့်တယ်၊ Benchmark ။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ရဲ့ဒုတိယအစီးကစနီကာနဲ့တိုက်ခန်းတွေပါ။ - ထိုအခါဤအချက်မှာကျနော်တို့နှစ်ခု setups အကြားသိသာခြားနားချက်ထောက်ပြသင့်သည်, စက်ဘီးစီးတာကတကယ့်ကိုတင်းကျပ်တယ်။ ထိရောက်မှုလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းပြားဖိနပ်ပေါ်မှာစီးနေရင်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စက်ဘီးစီးဖိနပ်အစီးတစ်ချောင်းကိုဝယ်ပြီးပြီ။ တကယ်တော့ဒါနည်းနည်းပဲ။
ဤစနီနာများသည်ပြေးရန်နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေနင်းအားဖြင့်ပါဝါကိုသယ်ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းမထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အကျွံပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကစားခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအချိန်ကာလကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ရန်ပြုလုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကြိမ်တွင်ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး တည်းသာမောင်းနှင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ - အင်း၊ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်မားဆုံးသောကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဒီတော့ခရစ်၊ မင်း Wahoo ရဲ့ခေါင်းကိုချွတ်လိုက်ပါ။ မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ထဲထည့်ပါ။ ခရစ်နဲ့ငါဟာဒီဒဏ္legာရီတောင်တက်လမ်းသုံးပုံနှစ်ပုံကိုစီးနင်းလိုက်ပါပြီ။ ပြီးတော့အဲဒီကိုရောက်ဖို့အပြင်းထန်ဆုံးလမ်းကိုစီးပါလိမ့်မယ်။ - ဟုတ်တယ်၊ ထိပ်မှာဒါမှမဟုတ်ထိပ်မှာတံတား။
ငါတို့ K သုံးလုံးပဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ မိနစ် ၃၀ ဆက်တိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ၂ ခုကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါ။ ရလဒ်အနည်းငယ်ကိုလွဲမှားစေနိုင်သည် ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့မင်းအရင်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ Sprint နဲ့သူတို့ကြာရှည်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ကြားကအိမ်တစ်ဝက်လောက်နည်းနည်းလေးလုပ်ရတာကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ မင်းကအများဆုံးကြိုးစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ - James ကဲ့သို့အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်။ သင် ဦး စွာသွားပါ။ ဘာလဲ၊ ငါ့ကိုလိုက်ဖမ်းတာလဲ အမြင့်တက်ခြင်း? - ဟုတ်တယ်၊ သုံးနာရီလောက်ပေးပါ။
ငါမုန်းတော့ဘာမှမရှိဘူး --- ငါစလုပ်တယ် (hypnotic EDM ဂီတ) Chris Opie၊ နံပါတ် ၁ ကိုကလစ်မပါသောခြေနင်းဖြင့်မောင်းပါ။ သုံး, နှစ်, တ ဦး တည်း, တက်, တက်, တက်, တက်, တက်, တက်, တက်! (Relaxed EDM ဂီတ) ဟုတ်တယ်၊ ခရစ်တော့နည်းနည်းလေးမှမတက်သင့်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်စမယ်။
သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ ငါကအဲဒီမှာဗီဒီယိုတွေရိုက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အထဲဝင်လိုက်၊ အမြန် Sprinter ကိုလိုက်ကြရအောင်! (သက်တောင့်သက်သာရှိသည့် EDM ဂီတ) - သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထိခိုက်စေခဲ့သည်။ (gasping) ယခုအခါအောက်ထပ်သို့ဆင်းရန်၊ ခြေနင်းကိုအလှည့်လှည့်ပြီးနောက်တဖန်လမ်းလျှောက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
Hank ငါ့ကိုဖမ်းနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ (Relaxed EDM ဂီတ) - နံပါတ် ၁ ပြီးသွားပြီ။ အခုခြေနင်းကိုပြောင်းကြကုန်အံ့။
အို! - ထိုခြေနင်းကိုကျွန်ုပ်စက်ဘီးပေါ်တွင်တကယ်မထားလိုပါ။ ဒါဟာငါမသိရပုံရတယ်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာပိုက်တစ်ခုထက်မကတန်တယ်။ ဝက်ဝံတွေကတကယ်လှည့်ဖျားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်စမ်းသပ်မှုကိုသင်လုပ်နိုင်တယ်။ မဟုတ်ဘူး၊ မမျှတဘူး
နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကသိပ္ပံပညာအတွက်ပါ။ အားလုံးကောင်းပြီ။ (ပျော့ပျောင်းသောအပြာရောင်ရော့ခ်ဂီတ) - ညာ၊ ခရစ်၊ သင်၏ Pinarello ပေါ်တွင်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ရန်မည်သို့ခံစားရသနည်း။ - ဒါဟာတကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမသိ၊ ဆိုလိုတာကငါ့ခြေကိုဘယ်နေရာမှာထားရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒီဖိနပ်မှာစက်ဘီးစီးဖို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူး။ မဟုတ်ပါ၊ ၃ ကီလိုမီတာအမြင့်ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ? - ဟင့်အင်းမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့စိတ်ပူစရာမလိုပါခင်ဗျာ။ ဒီမှာဒီမှာရှိနေလို့ပါ။
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? သုံး, နှစ်, တ ဦး တည်းနှင့်တက်! တက်၊ တက်၊ တက်၊ တက်၊ တက်၊ တက်၊ တက်၊ နှေးတယ် (ရန်လိုသည့်ရော့ခ်ဂီတ) ကောင်းပြီ၊ တိုက်ခန်းတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာကငါနဲ့ချိတ်ထားဖို့ငါမလိုဘူး။ ဒီတော့ဒီမှာဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘူး
သုံး, နှစ်ခု, တ ဦး တည်း, တက်! (grunting) နှေးကွေးစွာစတင်။ အိုးငါထင်ထားတာထက်ပိုခက်တယ်။ ဒါခက်တယ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ? - ဒါဟာတကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ထချင်တဲ့အချိန်တိုင်းနင့်ပုံမှန်လိုပဲခြေနင်းမတက်နိုင်ဘူး။
ဒါဟာပုံမှန်ထက်ထိုင်ခုံနေဖို့နဲ့ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားဂီယာကိုဖွင့်ဖို့ကပိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ - ဤရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရှုမြင်မည်နည်း။ - ကောင်းပြီ, ငါတို့ကလက်တော့ပ်တစ်လုံးလိုလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအခြားနေရာတစ်ခုမှာလုပ်မယ်။ ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ငါတို့ရဲ့စီးနင်းမှုကိုအခုအချိန်မှာပျော်မွေ့မယ်လို့ငါထင်တယ်။ - GCN ရုံးချုပ်ကိုပြန်ပို့ပြီးရလာဒ်တွေအားလုံးရှိတယ်။
ဒီတော့ခရစ်, သင်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား - ဒါငါကဒါကြောင့် Sa Calobra ရဲ့ထိပ်မှာသုံးကီလိုမီတာရှည်တဲ့လမ်းကိုလုပ်ဖို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ကလစ်မပါသောခြေနင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်? - လုပ်ကြရအောင် - ငါတို့ကဒါကိုမောင်းတယ်။ ဂျိမ်းစ်၊ ၃၆၇ ၀ ဝပ်၊ တစ်မိနစ်လျှင်တော်လှန်ရေး ၇၈ ကြိမ်ရှိသည်။ ၉၇ မိနစ်ကြာသည်။ - မဆိုးပါဘူး။ - ယခုငါနည်းနည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးပြီ၊ ၉း၁၂ မိနစ်။ ဒါပေမယ့်ငါကမင်းထက်အများကြီးပိုလေးတယ်။
ဒါကြောင့် ၄၀၉ ဝပ်ရှိပြီး၊ ၇၃ မှတ်ပဲ။ ငါကုန်းတက်နေတတ်တာ၊ ငါဟာပိုမိုလွယ်ကူတဲ့အဆင်အပြင်ရှိပြီးပိုမြန်လာတာနဲ့တူတယ်လို့အမြဲသတိထားမိတယ်။
ဒါကြောင့်မကလစ်နှိပ်ပါရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ကဒီလမ်းကိုစီးဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရ၏ ဘယ်လိုပိတ်မိလဲဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ဒီတိုက်ခန်းကထူးဆန်းနေတယ်မဟုတ်လား။ - ဒါဟာအနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအတိအကျတူညီမခံစားရဘူး ကျနော်တို့ရလဒ်များကိုပထမ ဦး ဆုံးရသင့်သလဲ - လုပ်ကြပါစို့၊ မနက် ၉:၄၂ မိနစ်ဖြင့် ၇၀ rpm ၌သင့်အတွက် ၃၅၁ watts ရှိသည်။ ၉:၄၇၊ ၃၈၀ ဝပ်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစက္ကန့်ခုနစ်ခုထည့်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့် cadence ကတော်တော်လေးဆိုးရွားစွာကျဆင်းသွားတယ်၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလိုင်းလိုင်းနည်းနည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ - ဒါဆိုနိဂုံးချုပ်ကဘာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်အများကြီးဖြုန်းတီးခြင်းမရှိဘူးထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးကခံစားချက်အပေါ်မူတည်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အတိအကျ။
သင်အလှည့်ကနေထွက်ပြီးအရှိန်မြှင့်ပြီးခြေနင်းကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်စက်ဘီးကမင်းအောက်မှာရှုပ်ထွေးနေသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သငျသညျပြောခဲ့သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်ငါတို့အဘို့တော်တော်လေးဂြိုလ်သားဖြစ်ခဲ့သည် - ဟုတ်, ငါဆိုလို, ငါနင်း၏ upstroke အပေါ်အားကိုး, အထူးသဖြင့်ငါတောင်တက်သောအခါ, ငါမျိုးလှည့်ပတ်ခြင်းနှင့်ပေါ်မှာအားကိုးရန်ရှိသည်။ ကိုယ့်အင်အားကိုချဉ်းကပ်ဖို့တောင်မှအနီးကပ်မလာနိုငျသောခံစားချက်ကိုချွတ် Tee ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ - မဟုတ်ပါ၊ သင်ထိုးနှက်ချက်ပြီးဆုံးသည်အထိသင်ကန ဦး ခုခံမှုကိုမရပါ။ တကယ်တော့စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် '၁၀% တောင်မှသိပ်မများဘူး၊ ဒါကတကယ်တော့ ၅% ပါ။ ဒါကလုံးဝမကောင်းဘူး။
ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာအာရုံခံစားမှုနဲ့ခံစားမှုအကြောင်းပါ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ငါတို့စက်ဘီးစီးတာကိုရပ်လိုက်တာနဲ့မတူဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ ငါကတော့သူတို့ထင်ထားသလိုအချိန်တိုအတွင်းကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်တွေမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒါဆိုမင်းမှာအိမ်မှာတိုက်ခန်းမရှိရင်တကယ်မရှိဘူးဆိုရင် အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အမြန်မခံစားရဘူး။ - မဟုတ်ပါ၊ နှစ်သက်သောအရာကိုလုပ်ပါ။ သင်ဤဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အား Sa Calobra တောင်တက်ခြင်းခံရသည်ကိုကြည့်ရတာနှစ်သက်ပါကဤဆောင်းပါးအတွက်ကြီးမားသောလက်မလျှော့ပါနှင့် - နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများအတွက်အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
Nukeproof Horizon Alloy WINNER ။
HT PA03A ပလပ်စတစ်အနိုင်ရရှိ။
Burgtec MK4 ဖွဲ့စည်းမှု။
DMR Vault ။
Burgtec Penthouse တိုက်ခန်း MK5 ။
ဘုရား TMAC ။
ခြေနင်းများသည်စက်ဘီးပေါ်တွင်မပြောဘဲမနေနိုင်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်ရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့သည်သင်၏အဓိကဆက်သွယ်မှုအမှတ်အသားဖြစ်သော်လည်းစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင်မည်သို့ခံစားသည်ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ GMBN မှာ Crank Brothers ကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ သူတို့က pedal flat pedals နဲ့ clipless pedals လုပ်တာတွေနဲ့ငါတို့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
Blake ကတိုက်ခန်းကိုချစ်၏။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကလစ်များပရိတ်သတ်ပေါ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မောင်းနှင်မှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော့်နောက်ကွယ်မှာခြေနင်းများနှင့်ဖိနပ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ခြေနင်းကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ဖို့ငါပြမယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်အရင်မေးသင့်တဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့သင်ကလစ်များသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများကိုမောင်းဖို့လား။ ဒါကြောင့်စက်ဘီးအများစုဟာပုံမှန်ခြေနင်းများတပ်ဆင်ထားပြီးသင့်ရဲ့မြင်းစီးသူရဲကျွမ်းကျင်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်သင်အသုံးပြုမည့်ခြေနင်းများဖြစ်သည်။
အခုတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကသင်သည်စက်ဘီးကိုစီး။ သင်၏ဖိနပ်များပေါ်တွင်စီး။ စီးနိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တန်းပေးသူတစ် ဦး, လမ်းလျှောက်ဖိနပ်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အခြေခံမောင်းနှင်မှုစွမ်းရည်ကိုသင်ယူနေပါတယ်။
ဤရွေ့ကားယုန် hops တူသောအရာဖြစ်ကြ၏, သင်အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်နားလည်မှုဆိုင်ကယ်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်စီး။ ပြီးတော့များသောအားဖြင့်လူတွေဟာ clipless pedals ကိုပြောင်းကြရတယ်။ သို့သော်အချို့သောလူများကစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အရာနှင့်အညီခြေရာနင်းရန်ဆက်လက်ရွေးချယ်ကြသည်။
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတာမင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလှည့်ပြီးလှည့်ပစ်လိုက်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်သင်ဟာစက်ဘီးစီးနေတယ်လို့မခံစားရနိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူသည်ယခင်တောင်ကုန်းကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်သောဆမ်ဟေးလ်ကိုကြည့်ပါ။ သူသည်ယခု 2017 Enduro World Series ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးသင်ဤလယ်ကွင်းပြိုင်ပွဲအများစုကိုလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ပုံမှန်မဟုတ်သောခြေနင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားချက်ချင်းရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဆမ်သည်သူစီးလိုသောအရာသည်မိမိစီးနင်းစတိုင်နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းလောကတွင်ကွဲလွဲမှုများရှိနေသည်။
သို့သော်သင့်ကိုစီးသောကလစ်များ (သို့) ခြေနင်းချွတ်ခြင်းများကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပါလိမ့်မည်။ Flat pedals များသည်သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးပြီး၎င်းတို့သည် clipless pedals များကဲ့သို့စီးနင်းရန်အလွန်ကြောက်စရာမကောင်းပါ။ ကျောက်တုံးဥယျာဉ်တစ်ခုကိုသင်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်၊ တစ်ခုခုမှားယွင်းလျှင်၊ သင်၏စက်ဘီးကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်၊ ချောသော၊ ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုပျော်ရွှင်စွာလုပ်နိုင်သည်ကို သိ၍
ပြီးတော့နိဂုံးလား။ ခြေနင်းချပ်ချပ်များဖြင့်သူတို့သည်ခုန်လိုသောသူများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ Blake လိုလူတွေ Clipless pedals များသည်မောင်းနှင်သူအများစုသည်စနစ်တကျစီးတတ်ရန်သင်ယူပြီးသည်နှင့်ပြုလုပ်သောသဘာဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
အခုတော့ clipless pedals ကိုစီးခြင်းရဲ့အားသာချက်များကတကယ်ထင်ရှားနေပြီ။ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင့်တော်သည့်စက်ဘီးဖိနပ်ဖြင့်စတင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ခိုင်မာသောဖိနပ်တစ်ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ခြေနင်းသို့သင်၏စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောခြေနင်းဖိနပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သိသာသည့်နင်းချုပ်ကိုင်ရန်။ ဒါပေမယ့်သင်အဲဒီလိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဖိနပ်ကို clickless pedal ပေါ်မှာနေရာချထားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုရှိနေလို့ပဲ။
ကောင်းပြီ၊ ခြေနင်း၌ကလစ်၏အခြားသောအဓိကကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာသင်သည်ထိုနင်းကိုနောက်သို့တက်ဆွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုသင်ကခြေနင်းလာသောအခါ၎င်းကိုအသုံးမပြုလိုတော့ပါ၊ သို့သော်သင်အလွန်အမင်းထိရောက်သောစက်ဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ခြင်းသည်သင်စက်ဘီးစီးနေစဉ်သင်၏ခြေထောက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်များစွာပိုကောင်းသည်။ အခုတော့နင်းသွားခြင်းအတွက်အခြားသောအားသာချက်များရှိသေးသည်။ သင်စက်ဘီးပေါ်တွင်ပိုမိုပေါ့ပါးသွားနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ကျောက်ပန်းဥယျာဉ်ကို ဖြတ်၍ ခြေနင်းတစ်ချောင်းကိုစီး။ ခြေနင်းကိုနင်း။ ရပ်တန့်ပြီးခုန်ဆင်းလျှင်သင်ပြောနိုင်သည်ကားသင်သည်စက်ဘီး၏နောက်ဘက်သို့ဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူစီးနင်းနေသည်။ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့နောက်ဘီးကအပြစ်ပေးမှုတွေအများကြီးလုပ်လိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကလစ်မပါသောခြေနင်းများဖြင့်စီးနင်းလိုက်ပါကသင်၏ခြေနင်းကိုနင်းရန်မလိုပါ။
ဒါကြောင့်မင်းကလွတ်တယ် ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဘားများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်ထားထားခြင်းကြောင့်လက်နှင့်လက်နာကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာနည်းပါးပါသည်။ ဒါကြောင့် clipless pedals တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့အားသာချက်တွေရှိပေမယ့်ဘယ်ဟာကသင့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်လဲဆိုတာခက်ခဲစေတယ်။ ကလစ်မပါသောခြေနင်းသည်သင့်ကားဒရိုင်ဘာထံမှ ပိုမို၍ ကတိကဝတ်လိုအပ်သည်။
သင်ဆိုလိုတာကသင်ကရော့ခ်ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုစိုစွတ်သောချောနေတဲ့လမ်းဘေးသို့မောင်းနှင်နေစဉ်၎င်းကိုသင်ကပြားချပ်ချပ် pedal ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားလို့ရပြီဆိုရင်စက်ဘီးမှခုန်ဆင်းလျှင်သင်မျဉ်းကြောင်းနှင့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမယ်။ clipless ခြေနင်းကိုစီး, ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိကြလော့။ သူတို့ကိုရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ (Blues ဂီတ) ပြားချပ်ချပ်ချပ်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်သင်စဉ်းစားရမည့်အရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမဆုံးစဉ်းစားရမဲ့အချက်ကတော့မင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ပဲ။ ဒီတော့ဒီလိုနုပျိုတဲ့ခြေနင်းကိုတကယ့်သေရည်သေတ္တာနဲ့လုပ်ထားတာ။ ဒါကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ထားတဲ့လူမီနီယမ်တွေထက်အများကြီးစျေးသက်သာပြီးသင်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ခြေနင်းများဖြစ်သည်။
အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အနည်းငယ် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ သို့သော်၎င်းသည် pedal ပြားကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူ၏အစ်ကိုခြေနင်းထက်အားသာချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ Crank Brothers မှနှစ် ဦး စလုံးသည် Q factor သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Q-factor အားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ crank နှင့် pedal လှောင်အိမ်၏အကွာအဝေးကိုဆိုလိုသည်။ ခြေသည်အမှန်တကယ်ပင် crank နှင့်ဝေးသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာခြေနင်းကိုအများကြီးရွေ့လျားရတာဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ကြီးမားစွာလှုပ်ရှားရတာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒါကသင့်အတွက်တကယ်တော်ပါတယ်။ အခုခြေနင်းအရွယ်အစားကိုသင်တွေ့ပြီဆိုလျှင်စျေးကွက်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
သို့သော် Crank Brothers သည်သူတို့၏လက်များကိုအနည်းငယ်လှည့်ကွက်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးဖြင့်နင်းကြသည်။ ပြီးတော့ခြေထောက်ကြီးကြီးနဲ့လူကြီးတွေကိုခြေနင်းပိုကြီးတဲ့ခြေနင်းသို့မဟုတ်ခြေနင်းသေးငယ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်ပါ။ အခုသူတို့ Pedalsis th ၏အထူနှင့်အတူစဉ်းစားရန်အခြားအရာ။
ဒီနင်းဘယ်လောက်ထူပြီးဒီခြေနင်းကဘယ်လောက်ပါးလွှာတယ်၊ သေးငယ်တဲ့နင်းကသင့်ကိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုများစွာပေးနေသည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်ဟာမြေထုဆွဲအားနိမ့်ကျတဲ့ဗဟိုချက်ရှိတယ်၊ စက်ဘီးပေါ်မှာပိုပြီးတည်ငြိမ်တယ်လို့ခံစားရတယ်၊ မြေကြီးကိုထိမိနိုင်ခြေနည်းသောအမြစ်များ။ အားနည်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကြောင့်အလွန်တင်းကျပ်သော Q အချက်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် crank ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကခြေထောက်ကြီးမားစွာရှိပါကသို့မဟုတ်သင်၏ခြေနင်းကိုရွေ့လျားလိုပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်အလွန်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပေ။ ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခုတော့သင်တန်း၏, နင်းရွေးချယ်မှုသင်နှင့်သင်စက်ဘီးစီးဘယ်လိုစီးနင်းပေမယ့်အဲဒီမှာကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအနည်းငယ်စဉ်းစားပါ။
ခြေနင်းချပ်ပြားများနှင့်နောက်ဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာမှာ၎င်းတို့တွင်မည်မျှချုပ်ကိုင်ထားသည်ကိုဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်အဆုံးစွန်သောချုပ်ကိုင်မှုကိုလိုချင်နေသည်ဟုစဉ်းစားနေပြီးသင်၏ခြေထောက်သည်နေရာတကာသို့ပြောင်း။ မရ၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့တချို့ယာဉ်မောင်းတွေကတော့အဲဒါကိုမလိုချင်ဘူး။
ဥပမာအားဖြင့် Blake သည်အလွန်ခုန်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်သူသည်ခြေနင်းကိုရွှေ့လို။ သူ၏ခြေနင်းပေါ်ရှိတိုတောင်းသောတံသင်များကိုလိုချင်သဖြင့်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ခြေနင်းပြားချပ်ချပ်ကိုစီးတဲ့အခါငါဘယ်ခြေရာမှမသွားချင်ဘူး၊ ငါအဲဒီမှာကပ်ထားချင်တယ်။ အထူးသဖြင့်အပြင်ဘက်ရှိပိုကြီးသောတံသင်များကိုသုံးခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းရှိတိုတောင်းသောတံသင်များသုံးခြင်းဖြင့်သင် pedal ခံစားမှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
သို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီ DMR နင်းမှာဒီရွေးချယ်စရာမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ခြေထောက်ကသဘာဝကျကျထိုင်တယ်။ ကြည့်ရတာတော်တော်ခွက်ပဲ။ ဒါကြောင့်ပြားချပ်ချပ် pedal များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
သင်မဝယ်မီသင့်အတွက်အရေးကြီးသောအရာများကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ယူပါ။ (Blues ဂီတ) ယခုကလစ်မပါသောခြေနင်းကိုရွေးချယ်ကြည့်ကြစို့၊ ၎င်းမှာ pedal ပြားထက်အနည်းငယ်ပိုပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးသင်သည်မည်သူမြင်းစီးသူရဲကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်? သင်ဟာ XC မြင်းစီးသူရဲ၊ သင် Trail လား၊ Enduro မြင်းစီးသူရဲလား၊ ပြီးတော့သင်ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ဖိနပ်အမျိုးအစားကိုစဉ်းစားချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ XC စီးသူတစ်ယောက်ဆိုရင်ဆောင်းရာသီဖိနပ်ဆိုတာလျစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာ XC ဖိနပ်ပဲ။
သင့်မှာအလွန်ခိုင်မာသောဖိနပ်ရှိလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အနည်းငယ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနင်းချင်တယ်။ ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။
သင်၏ပျမ်းမျှလမ်းကြောင်းမြင်းစီးသူရဲအတွက်သင်အလားတူလိုင်းများတွင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောအရာတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေလိမ့်မည်။ သို့သော် ပို၍ ကြီးမားသောဖိနပ်ရှိပြီးစက်ဘီးမှအနည်းငယ်ပိုကောင်းသည့်အပြင်သင်ရွေးချယ်သောခြေနင်းအမျိုးအစားကိုပိုမိုလွတ်လပ်စေသည်။ သင်ဟာ Enduro စီးနင်းစတိုင်ကိုပိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်အသုံးပြုနိုင်သောခြေနင်းများကိုကန့်သတ်ထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ထားလွန်းသောကြောင့်ပိုမိုကြီးမားသောကုန်းမြင့်ခြေနင်းများတွင်ဤအရာကိုမသုံးချင်ပါ။ ထိုအခါသူကအမှန်တကယ်နင်း၏ unclipping ဆီးတားလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ကုန်းဆင်း option ရှိပါတယ်။
ကုန်းဆင်း option တွင်သင် pedal ၏ကြီးမားသောtoရိယာနှင့်အပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသောအချောမွေ့ဆုံးအချောမွေ့ဆုံးဖိနပ်ကိုသင်လိုချင်သည်။ ပထမဆုံးခြေနင်းကိုအရင်ကြည့်ကြစို့။ ပြီးတော့ဖိနပ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျကျွန်တော်တို့ပြနိူင်တယ်။ XC မြင်းစီးသူရဲတွေအတွက်သူတို့မှာတကယ်ကိုခိုင်မာသောဖိနပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသင်မခံစားမိလို့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးအတွက်ပိုကြီးတဲ့ခြေနင်းကိုမဆိုလိုဘူး။
ဤအရာသည်အလွန်သေးငယ်သော caged နင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိူင်သည်။ အခုတော့ဒါကအသေးငယ်ဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ သေးသေးလေးတွေပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကလူတွေဆက်လုပ်မယ့်အရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ကောင်းပါတယ်။ သေး။ သေးငယ်သည်၊ ဖိနပ်ပေါ်တွင်ကောင်းစွာထိုင်သည့် clip retention system ၏အပြင်ဘက်တွင်ပခုံးများသာရှိသည်။
သင်လိုအပ်သည့်အကူအညီကိုသင်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်အလွန်နည်းပါးပြီး XC မြင်းစီးသူမလိုအပ်သည့်ရွှံ့အလုပ်နှင့်ပိတ်ဆို့။ မရပါ။ ဒီတော့တောင်တစ်လုံးလုံးနဲ့ enduro မြင်းစီးသူရဲအတွက်၊ သင်ဟာရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကွဲပြားနေတယ်။ ပထမ ဦး စွာ၊ သင်၌ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ရွေးစရာရှိသည်။ ၎င်းမှာ XC စတိုင်အပိုပါရှိသည်။
ဒါကြောင့်တူညီတဲ့ cleat retention ကိုစနစ်ကရှိပါတယ်။ ခြေနင်းကိုကျောက်တုံးများနှင့်မြေပြင်ဒဏ်ခတ်မှုများမှကာကွယ်ရန်ရှေ့တွင်အတောင်များထားရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကဒီခြေနင်းကိုအနည်းငယ်ပိုတည်ငြိမ်စေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သာမာန် XC ဖိနပ်ထက်အနည်းငယ်ပိုသောဖိနပ်ကပိုနူးညံ့သောဖိနပ်ဖြင့်သွားသည်။
Spectrum ၏အခြားအဆုံးရှိအခြားရွေးချယ်စရာမှာအနည်းငယ်ပိုကြီးသောခြေနင်းဖြစ်သည်။ အခုတော့သူကပြားချပ်ချပ် pedals တွေအပေါ်အခြေခံထားသည့်ဆင်းကုန်းခြေနင်းများနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည် ပို၍ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုသေးငယ်ပေါ့ပါးသောအထုပ်ထဲတွင်ဆင်းနေသောခြေနင်း၏အထောက်အပံ့နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။
အခုဆိုရင်သူတို့ဟာတကယ့်ကိုရန်လိုတဲ့ enduro စတိုင်ဖိနပ်နဲ့အတူတကွသွားလာကြပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးကိုပေးကြပြီ ဒါကဒါကလမ်းကြောင်းအာရုံစိုက်တဲ့ဖိနပ်ပါ၊ XC ဖိနပ်နဲ့ဆင်တူတယ်။ အပေါ်ဘက်ကတော်တော်လေးပေါ့တယ်၊ ဒီမှာအောက်ခြေမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စက်ယန္တရားတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်မင်းကတော်တော်ကျယ်တဲ့ဖိနပ်တစ်ခုရှိပြီးစက်ဘီးအတွက်ကောင်းတယ်။ ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ဖိနပ်မှာဒီနေရာမှာမျှမျှတတပြားတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ခြေနင်းတွေနဲ့ကောင်းကောင်းပေါင်းစပ်နိုင်တယ်၊ သင်ကသေးငယ်တဲ့နင်းကိုသုံးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးတဲ့နင်းကိုသုံးနိုင်တယ်။
သင်တကယ်ကို XC ဖိနပ်ဖြင့်မရပေ။ ဒီရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်သင့်တွင် enduro အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်ရှူးဖိနပ်ရှိသည်။ ဒီတော့ဒီနေရာမှာသင့်တော်တဲ့ထိန်းညှိမှုစနစ်ကိုအထက်မှာထားတယ်၊ သင့်မှာပိုတည်ငြိမ်တဲ့ခြေချောင်းသေတ္တာ၊ ဖနောင့်သေတ္တာ၊ အတွင်းခြေကျင်းကာကွယ်မှုနဲ့မြေပြင်အနေအထားအတွက်ရန်လိုတဲ့ဖိအားတစ်ခုရှိတယ်။
သေးငယ်သောခြေနင်းများနှင့်အတူသင်ထိုအကူအညီများအားလုံးအတွက်နင်းတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်ကိုတကယ်လိုချင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုန်းဆင်းခြေနင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ထိုအရာများအရ၎င်းတို့သည်ပုံသဏ္andာန်နှင့်စတိုင်အလွန်သေးငယ်သောခြေနင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
ဒါပေမယ့်သူတို့ကအလယ်မှာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစနစ်ရှိတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့အနေနဲ့ pedal flat pedal နဲ့ထောက်ပန်ရတာကတော့သင်စက်ဘီးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအဲဒီခြေနင်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးအပေါ်မှီခိုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်စနစ်တကျနေရာချထားခြင်းမခံရပါက၊ သင့်တွင်ဤလှောင်အိမ်ထားရှိခြင်း။
အထူးသဖြင့်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ သင်စီးနင်းနေသောမြေပြင်အနေအထားများနှင့်အတူနိမ့်ကျသောစီးနင်းခြင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်၊ သင်စီးဖို့သူတို့အတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံလိုတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ညာဘက် cleats နှင့်အတူသူတို့အားဖိနပ်မဆိုဤထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစနစ်ပေါ်တွင်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကညာဘက်မခံစားရဘူး။
အကောင်းဆုံးကတော့သင်ရှာနေတာကပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်ပါတဲ့ဖိနပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပိုပြီးဖိနပ်နဲ့တူ။ ပြီးတော့ဒီကလစ်ညှပ်ယန္တရားနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသင်ကအနင်းပြားတစ်ချောင်းစီးနေတယ်လို့ခံစားရသလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့မှာသော့ခတ်ထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။
သင်၏ခြေနင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားစဉ်းစားရမည့်အရာမှာသင်သည်ရေစိုခံအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမလိုချင်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ဟာရေကူးခြင်းများစွာလိုချင်သလား။ တဖန်ငါငါ buoyancy အားဖြင့်ဆိုလိုတာကသင်မထင်မှတ်သည့်ရှေ့တော်၌သံကြိုးအတွင်းသံကြိုးအတွင်းပြုလုပ်သောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီ Shimano နင့်မှာရေယိုယွင်းမှုမရှိပါဘူး။ သင်ကကလစ်နှိပ်သောအခါသင်နင်း၌သော့ခတ်တူသောဒါဟာခံစားရတယ်, ဤသည်ကသင် ins တွေကိုသိတယ်။
ဒါကမဆိုးပါဘူးဒါကြောင့်သင်ကသင်၏ခြေကျင်းကိုရွေ့ခြင်းဖြင့်ညှပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ယခုအချို့သောယာဉ်မောင်းများသည်ထိုခံစားမှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ crank ညီအစ်ကိုတွေ, သူတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသည်။
မင်းရဲ့ဘောင်းဘီပေါ် ဦး တည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးသင့်မှာရေဒီယိုလှိုင်းများ ၁၅ သို့မဟုတ် ၂၀ ဒီဂရီရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သင်ဤမြှင့်တင်ရန်ချင်မလဲ ကောင်းပြီ၊ ပထမအချက်ကအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားကနေရာတစ်ခုကိုကန့်သတ်မထားဘူး၊ အခုတော့ရန်လိုတဲ့ enduro မြင်းစီးသူရဲတွေနဲ့တောင်ပေါ်ကမြင်းစီးသူရဲတွေကအထူးသဖြင့်သူတို့ထွက်သွားစရာမလိုဘဲခြေနင်းပေါ်ရွေ့လျားနိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကြောင့်အထူးသဖြင့်ချစ်ကြတယ်။
၎င်းသည်ကျောက်ဆောင်ဥယျာဉ်များနှင့်ပြင်းထန်သောမောင်းနှင်မှုအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အသုံး ၀ င်ပြီးသင်ရရှိနိုင်သောပြားချပ်ချပ်နင်းအမျိုးအစားများနှင့်စျေးကွက်ရှိညှပ်ဖိညှပ်အမျိုးမျိုးကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အခုတော့ clips နှင့်တိုက်ခန်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းအချက်များရရှိနိုင်ပါသည် -End ။
သင်ဖိနပ်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်အနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ကိုကလစ်မပိတ်သောခြေနင်းများနှင့်အတူသတိရရန်လိုသည်။ သို့သော်သင်ကပြားချပ်ချပ်သောခြေနင်းကိုကပ်ထားပါက၎င်းတို့အားခြေနင်းအတိုခြေနင်းဖိနပ်အပြားကိုလျောက်ပတ်ထားပါ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့စက်ဘီးအတွက်ကောင်းတဲ့အထုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် Blake ကိုကလစ်ညှပ် pedals တွေပေါ်မှာ pedal flat ride စီးသူအဖြစ်မြင်တာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းသည်အလွန်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခြေနင်း၏စက်ပြင်စက်နှင့်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ စက်ဘီးအတွက်မည်သည့်အဆီနှင့်ချောဆီကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုမည်ကိုရှာဖွေလိုပါက၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုမည်ကိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အမြဲတမ်းလိုပဲ subscribe လုပ်ရန်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဆောင်းပါးကိုကြိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်မထောင်ပါစေ။
ကြည့်ရှုနင်းသည် Shimano ထက်ပိုကောင်းသလား။
ဤသံမဏိပြားများသည်ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး scuff နှင့် pedal wear များကိုလျော့နည်းစေရုံသာမက clip-in performance ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ TheShimanoSPD-SL သဘောတရားသည်အလွန်ဆင်တူသည်ကြည့်ပါKeo pedal သည်ထင်ရှားသောခြားနားချက်သည်အနည်းငယ်ပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောပလက်ဖောင်းမျက်နှာပြင်areaရိယာ၏ပုံစံဖြစ်သည်။27 2021 ။
အကောင်းဘက်ကဘာ pedal တွေကိုသုံးသလဲ။
အတွက်မြင်းစီးသူရဲများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုဘို့တပ်စုတစ်စုအသုံးပြုသည်Shimano သို့မဟုတ် Look ဖြစ်စေခြေနင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုက WorldTour အသင်းအများစုကိုကမကထပြုတယ်။ ထို့အပြင်အချို့အသင်းများသည်၎င်းတို့၏မြင်းစီးသူရဲများအားအတူတူပင်ထားလိုကြသည်ခြေနင်းအိမ်သူအိမ်သားများသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အားမိမိစက်ဘီးကိုပေးနိုင်သည်။နှစ်ဆယ်။ 2017 ။
Shimano SPD ခြေနင်းများသည်ဟောင်းနွမ်းနေသလား။
အဖြေမှာဟုတ်ကဲ့SPD ခြေနင်းဟောင်းနွမ်း။ နောက်မေးခွန်းမှာသင်မည်ကဲ့သို့ပြောပြနိုင်ကြောင်းဖြစ်သည်နင်းဟုတ်တယ်အားကုန်ပင်ပန်းသည်? အခါတိုးချဲ့မှုအားဖြင့်လုပ်တယ်သင်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်SPDဖိနပ်ချပ်။SPDတောင်တက်စက်ဘီးခြေနင်းအလွန်ကြမ်းတမ်းဖြစ်ကြသည်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းSPDတောင်တက်စက်ဘီးခြေနင်းကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်စျေးနှုန်းများအတွက်လာ။
ဘယ်အချိန်မှာ SPD နင်းကိုငါအစားထိုးသင့်သလဲ
ဘယ်တော့လဲShimano SPDcleat အလုံအလောက်ကျီ, ကထဲကသင်၏ခြေကိုရရန်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်ခြေနင်း။ မင်းလုပ်နိုင်အသစ်တစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အင်္ကျီကိုလည်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဝတ်ဆင်ချပ်သင့်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်အစားထိုးသူတို့သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်မတိုင်မီသူတို့ SPDs များဖြစ်လျှင်ကပ်ပါစေ၊08.07.2016
ရိုးရိုးလေးပြောရရင်သင်အလေးချိန်နဲ့မတူဘဲတူညီတဲ့စွမ်းအင်ပမာဏကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုင်ကယ်မင်းစီးနေတယ် တစ် ဦး အပေါ်ပိုလေးတဲ့စက်ဘီးသင်ဟာပေါ့ပါးတဲ့နေရာထက်သင်နှေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုင်ကယ်။
ဟုတ်တယ်၊နင်းအလေးချိန်ထိုက်တန်ပါတယ် မည်သည့်စနစ်တွင်မဆိုဆုံးရှုံးမှုများအမြဲတမ်းရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်သုညသုညလုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်လမ်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားခြင်းမရှိသည့်ပိုမိုလေးသောအရာဝတ္ထုကိုသင်အတွက်အမြဲတစေသင်ပေးရလိမ့်မည်။